३ बर्षमा सबैै झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने ! - Sabal Post
३ बर्षमा सबैै झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने !
शरद शर्मा /काठमाडौँ, २८ कात्तिक । सरकारले तीन वर्षभित्रमा सबैै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले तीन वर्षमा निर्माण हुन बाँकी रहेका दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने गरी काम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद् बैठकको पहिलो बैठकबाट तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।
“अहिले पुलको अभावमा जोखिमपूर्ण र कष्टपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्” उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसाधारणलाई एक घण्टाभन्दा बढी फेरो लगाएर नदी तर्न नपर्ने गरी सुगमता प्रदान गर्नका लागि पुल निर्माण गर्न थालिएको हो ।” उहाँका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा ७०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने गरी कामसमेत शुरु गरिएको छ । यस्तै यस आवमा ६५८ झोलुङ्गे पुलको नियमित प्राविधिक सेवासमेत दिइएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहले सङ्घ र प्रदेश तहले उपलब्ध गराएको बजेट र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेको आधारमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्नेछ । प्रवक्ता अधिकारीले दुई हजार ४०० झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र झोलुङ्गे पुल सहयोग एकाइबीच चाँडै नै त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरसमेत हुने जानकारी गराउनुभयो ।
समझदारीमा हस्ताक्षर हुने बित्तिकै कामलाई तीव्रता लगिने उहाँले बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिले १२० मिटरसम्मका र निर्माण व्यवसायीबाट १२० मिटरभन्दा बढी लामो दूरीका झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न सक्नेछन् । यसरी निर्माण भएका झोलुङ्गे पुलको नियमित मर्मतसम्भार स्थानीय तहले गर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले मुलुकभरि करीब सात हजार ५०० झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् ।
नाना थरी स्टाटसको जबाफ दिनु जरुरी छैन…
अध्यक्षले निमित्त प्रमुख तोकेपछि रामापुर क्याम्पसमा तालाबन्दी